SANTÉ : TOUS ENSEMBLE CONTRE L'HÉPATITE-B - TVMADA - RADIOMADA
Areti-mandoza tena vitsy mpahalala ny Hepatite B. Raha ny aretina toy ny tazomoka, ny gripa, ny kohaka, ny sida,sns… no be mpahafantatra dia ny HEPATITE B kosa dia azo lazaina fa azo isaina amin’ny ratsan-tanana tokoa ireo mahalala ity karazana aretina ity. Ity HEPATITE B ity anefa dia tena aretina mitondra ho amin’ny fahafatesana tokoa ary ny tena mampihorikoditra dia amin’izao fotoana izao dia ny 23% n’ny vahoaka malagasy dia efa tratran’ity aretina ity avokoa.
Azo avy amin’ny firaisana ara nofo, ny fitaovana fampiasan’ireo Dokotera na mpanala nify fotsiny aza, na ireo any amin’ny fanomezan-drà na transfusion izany , ity areti-mandoza ity. Ny “aty” na « Foie » » no taova hitomboany ary mamotika io “aty” io ilay karazana « virus ». Tsy misy hahalalàna azy ity ary amin’ny voalohany dia toa salama tsara ihany ilay marary.
Lafo dia lafo anefa ny fitsaboana ity aretina ity satria ny fanafody hitsaboana azy hoan’ny olona iray dia mitentina 48 000 000Ariary izay tsy azo antoka 100% akory aza ny fahasitranany.
Amin’izao fihanaky ny aretina HEPATITE B izao dia nanapa-kevitra ilay orinasa mpanafatra fanafody lehibe SOPHARMAD ka nanao fifampiraharahana tamin’ilay mpamokatra fanafody frantsay SANOFI ary manao fihenam-bidy lehibe. Amin’ity indray mitoraka ity noho izany dia misy fihenam-bidy hataon’ny SOPHARMAD mandrapahatongan’ny 15 Septambra 2017 ka 13.300Ariary ny vidin’ny Vakisiny iray fanefitry ny HEPATITE B ka mihisa 3 ireo vakisiny tokony hatao ireo, ka mitentina 39.900Ariary izy telo ireto. Ankoatra io fotoana voalaza teo io, izany hoe aorian’ny 15 Septambra dia ho lasa 40.000Ariary ny vidin’ny vakisiny iray, izany hoe 120.000Ariary izy telo.
Inoana noho izany fa ho betsaka ireo olona hanantona toeram-pitsaboana misy ny fanaovana ity vakisny fanefitry ny HEPATITE B ity satria “aleo misoroka toy izay mitsabo” hoy ilay fitenenana .
Lot VC 67 A – Faliarivo-Ambanidia
Tel Madagascar : +261 (0) 20 22 267 02 – +261 (0) 20 22 610 34